Archive du 20170919
Ravalomanana sy Pr Zafy Nihaona teny Ivandry
Nihaona sy nifampiresaka teny Ivandry omaly ny filoha teo aloha mirahalahy Marc Ravalomanana sy Albert Zafy.
Fisokafan’ny MBS Tsy mbola ho amin’ity fitondran’ny HVM ity
Tsotra sady mazava ny valin-tenin’i Hery Rajaonarimampianina raha nanontaniana ny antony tsy amelan’ny fanjakana ny hisokafan’ny haino aman-jery MBS ny tenany.
Fifidianana filohan’ny CFM Tsara toerana Rabe Landry sy i Maka Alphonse
Amin’ireo mpikambana CFM na Conseil du Fampihavanana Malagasy vao avy nanao fianianana ny alarobia 13 septambra 2017 lasa teo toa an-dry Mangalaza Eugène,
Tofoka sy leo
Miarahaba ry jean a.Manakory ny namana rehetra any e, ianareo aloha dia tsy taramihitsy raha vao hiondrana any ivelany.
Lions Club sy ny CUA Mihamatotra hatrany ny fiaraha-miasa
Nitsidika tamin’ny fomba am-panajana ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra nosoloantenan’ny lefitra voalohany ny fiadidiana ny tanàna, Col Ramboasalama Emilien sy ny talen’ny kabinetra Jean Claude Rabarijaona teny amin’ny lapan’ny tanàna Analakely,
Maharante Jean de Dieu Gaboraraka ny fampidirana mpiasam-panjakana
Tsy fantatra mazava hatramin’izao ny tena isan’ireo mpiasam-bahoaka eto Madagasikara, hoy ny minisitry ny asam-panjakana Maharante Jean de Dieu.
MITIA SY FITIA Tsy misy ahiana intsony ny amin’izy ireo
Salama tsara tsy misy ahiana intsony ny fahasalaman’i Mitia sy Fitia zazavavy kely roa kambana nitambatra teo amin’ny kibony avy any Vakinankaratra, nodidiana tetsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ny 13 septambra teo.
Kolikoly any Alaotra Dosie 30 hanaovan’ny Bianco fanadihadiana
Ireo sampan’asa eo anivon’ny Bianco Toamasina rehetra no ezahana entina eny ifotony, hoy ny tale iraisam-paritra ity Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ity.
Bekisoa Soavimasoandro Raikitra ny adin’ny Sinoa sy karana amin’ny Malagasy
Maromaro ihany izay raharahana ady tany nitranga tato ho ato izay. Tapa-bolana lasa izay dia vahoaka an’arivony no nitokona tetsy amin’ny fokontanin’i Bekisoa Soavimasoandro ao amin’ny firaisana faha 5.
Mitsapatsapa hatramin’ny farany
Nampanantenaina aloha ny vahoaka malagasy fa hovahana ao anatin’ny 3 volana ny delestazy.
Fiarabe nanimba ny tetezan’i Vohiposa Nihoatra 11 taonina ny entana nentiny
55 taonina, izany hoe nihoatra 11 taonina tamin’ny eken’ny lalàna no lanjan’ilay fiarabe nanimba ny tetezan’i Vohiposa (RN7).
Orinasa Publi motion Hanome “Lanterne” maimaimpoana ho an’ny Taxi
Niteraka savorovoro teo amin’ny tontolon’ny fitaterana am-piarakaretsaka hatrany nanomboka tany amin’ny faran’ny volana martsa ka hatramin’izao ny mikasika ny fampiasana ilay lanterina vaovao izay tao anatin’ny vinan’asan’ny fiadidian’ny kaominin’Antananarivo (CUA) mba hanatsarana ny endriky ny renivohitr’I Madagasikara.
URBAN SHOW Hampiala voly ny tanora eto an-drenivohitra
Hanome fotoana manokana ireo tanora eto an-drenivohitra amin’ny alalan’ilay hetsika antsoina hoe :
Fandrobana tany Faratsiho Mpivarotra 7 nasesin’ny jiolahy
Ankoatra ny pesta nampalaza an’i Faratsiho teo, sesilany koa ny tsy fandriampahalemana any an-toerana tato ato.
Renim-pianakaviana iray no teraka tao anaty taksibe zotra 114 omaly antoandro.